Caalamka, 18 May 2019
Sabti 18 May 2019
Xisbiga Muxaafidka oo ku Guuleystay Doorashada Australia
Xisbiga midigta dhexe ee muxaafidka ah ee dalka Australia ayaa si lama filaan ah ugu guuleystay doorashadi guud ee dalkaasi ka dhacday Sabtidi maanta, saacado yar kaddib marki ay soo baxeen warar sheegayay in xisbiga shaqaalaha uu qarka u saaranyahay guusha doorashada.
Afghanistan: Askar si qaldan loogu dilay duqeyn
Duqeyn ay militariga ajnabiga ah ee jooga dalka Afghanistan ka fuliyeen gobolka koonfureed ee Helmand ayaa si qaldan u dishay 17 ka mid ah ciidamada dowladda, islamarkaana dhaawacday 14 kale.
Diyaarado drone ah 'oo weeraray Sacuudiga'
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in diyaarado Drones ah (nooca aan duuliyaha lahayn) oo sida walxa qarxa ay maanta weerar ku qaadeen goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaalla magaalada Riyadh.
Iran oo lagu tuhmayo weerarkii maraakiibta
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in khuburo milatari ay rumeysan yihiin in waxyaabaha qarxa loo adgeegsaday in lagu dulueeliyo afar Markab oo lagu weeraray xeebta Imaaraadka Carabta, islamarkaana la tuhmayo in Iran ay ku lug lahayd balse aysan hayn wax caddeyn ah.
Shiinaha oo ka aargutay Mareykanka
Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur kusoo rogi doonaan badeecadaha dalkaas looga soo dhoofiyo Mareykanka, oo qiimahoodu dhan yahay 60 bilyan oo dollar, laga billaabo 1-da June.
Sacuudiga oo sheegay in la weeraray maraakiibtiisa
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay “waxyeello xooggan” kasoo gaartay weerar arbushaad ah oo axaddii loogu gaystay xeebta Imaaraadka Carabta.
QM: Xuutiyiintu way ka baxeen dekedaha Yemen
Qaramada midoobay ayaa sheegtay Axaddii shalay in ka bixitaanka Maleeshiyada Xuutiyiinta ee Dekedaha Muhiimka ah ee Yemen ay ku dhacday si waafaqsan qorshii lagu heshiiyay.
Marakiib ay Leedahay Imaaraadka Carabta oo La Weeraray
Dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in afar markab oo kuwa ganacsiga ah lagu qaaday weerarro lagu waxyeellaynayo maanta meel u dhow biyaheeda Gacanka Cumaan.
Xutiyiinta oo Ka Baxaya Xudeyda
Ururka Xuutiyiinta Yemen ayaa maanta billaabay inay ka baxaan dekadaha Saleef iyo Ras Issa ee gobolka Xudeyda.
Iran oo ku gacan seertay yabooha Trump
Hoos u dhac ku yimid faa'iidooyinka Emirates Airline
Shirkadda diyaaradaha Emirates Airline ayaa shaacisay in hoos u dhac 69% uu ku yimid faa’iidooyinkeeda sababtuna ay tahay sare u kaca qiimaha shidaalka iyo dollar-ka, ayada oo wajahday sanad aad u adag.
Korea-da Waqooyi oo gantaal cusub tijaabisay
Korea-da Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal aan noociisa la aqoonsan, sida uu sheegay militariga dalka Korea-da Koonfureed. Waa tijaabadii labaad oo Pyongyang ay sameyso wax ka yar toddobaad gudihiis.